Dagaal Sababay Khasare Dhimasho Iyo Dhaawac Oo Ka Dhacay Magaalada Gaalkacyo | Berberatoday.com
Dagaal Sababay Khasare Dhimasho Iyo Dhaawac Oo Ka Dhacay Magaalada Gaalkacyo
Gaalkacayo(Berberatoday.com)-Dagaal culus ayaa waaberigii hore ee maanta ka qarxay meel ku dhaw Kontroolka Galbeed ee Magaaladda Galkacayo, kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Galmudug ay weerar ku soo qaadeen goob laga dhisayay maxjarka cafimaadka xoolaha ee Gaalkacayo.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay dagaalkaas, tiro intaa ka badan oo dhaawac ah ayaa la geeyay cusbitaalka Galkacayo sida ay Horseed media u sheegeen dad xog ogaal ah oo ku sugan magaaladda Galkacayo.
Wararku waxay intaas ku darayaan in dagaalku uu weli ka socda qaybo ka mid ah xaafadda Garsoor , oo inta badan magaaladda laga maqlayo dhawaqa hubka culus iyo Midka fudud oo labada dhinac ay isku adeegsanayaan.
Puntland iyo maamulka Galmudug ayaan weli ka hadlin sabaha dhaliyay dagaalka Galkacayo iyo khasaaraha ka dhashay, hase yeeshee goobta dagaalku uu ka dhacay ayaa ahayd meel loogu talagalay in laga dhiso maxjar xoolaha lagu xanaaneeyo, islamarkaana lagu kala wareejiyo xoolaha laga keeno koonfurta iyo Bbrtamaha Soomaaliya.
Dadaalo ay wadaan waxgaradka Puntland iyo Galmudug ayaa ka socda magaalada oo lagu qaboojinayo xiisadda ka soo cusboonaatay magaalada, waxaana goobtii uu ka dhacay dagaalka laga maqlayaa rasaas goos-goos ah.